အကာအကွယ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ - China Protective equipment Suppliers & Factory
ZR-1070 စနစ်တွင် ဓာတ်ငွေ့ရင်းမြစ် ထုတ်လုပ်မှုစနစ်၊ ထောက်လှမ်းမှု ပင်မကိုယ်ထည်၊ အကာအကွယ်စနစ် နှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းကို ခြောက်သွေ့သောအခြေအနေရှိ ရောဂါပိုးမွှားဝင်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းကို ခွဲစိတ်စာရွက်၊ ခွဲစိတ်မှုအဝတ်နှင့် သန့်ရှင်းသောအဝတ်များ .
Model ZR-1000 မျက်နှာဖုံး ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်မှု ထိရောက်မှု စမ်းသပ်ခြင်း (BFE) ၏ အဓိက သတ်မှတ်ချက်များသည် YY0469-2011 တွင် B.1.1 ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရုံသာမက၊ASTMF2100၊ ASTMF2101 နှင့် ဥရောပ EN14683 စံနှုန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်လည်း ကိုက်ညီပါသည်။
ZR-1311 ဆား aerosol generator သည် တိကျသောအရွယ်အစားနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုတွင် aerosol အမှုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက် NaCl ပျော်ရည်၏ atomize နှင့်ခြောက်သွေ့သော သီးခြားအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြုလုပ်ရန် Collison nozzle ကိုအသုံးပြုသည့် အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။အမျိုးသားရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန်အတွက် ၎င်းတွင် ပြင်ပလေအရင်းအမြစ် ဒီဇိုင်း၊ အခြောက်ခံကိရိယာ နှင့် နော်ဇယ်များစွာ ထိန်းညှိထားသည့် အဆို့ရှင်တို့ ပါရှိသည်။လေစီးဆင်းမှုနှုန်း 100L/min-120L/min အကြားရှိသောအခါ၊ အထွက် aerosol အာရုံစူးစိုက်မှုသည် (10-50)μg/m အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။3.
ZR-1304 Aerosol မီးစက်
ZR-1304 oil aerosol generator သည် cool generation method ဖြင့် oil aerosols ကိုထုတ်ပေးနိုင်သည့် အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။လေ၀င်လေထွက်သည် 0~120 L/min ရှိသောအခါ အထွက်လေရိုးစွန်းအာရုံစူးစိုက်မှုအကွာအဝေးသည် 0~200 mg/m³ ဖြစ်ပြီး၊ ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးတွင် aerosol အာရုံစူးစိုက်မှုကို ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် dilution flow ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။Aerosols များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာ စစ်ဆေးရေးဌာနများ၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဌာနများ၊ ဆေးဆိုင်ကုမ္ပဏီများ၊ သန့်ရှင်းသောအခန်းများတွင် HEPA စစ်ထုတ်မှုများ ယိုစိမ့်မှုကို သိရှိနိုင်သည်။
ZR-1220 Mask အံဝင်ခွင်ကျ စမ်းသပ်သူ
ZR-1220 mask fit tester သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများအတွက် OSHA နှင့် GB 19083-2010 နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော နှာခေါင်းစည်းများနှင့် အသက်ရှူကိရိယာများ အံကိုက်စမ်းသပ်မှုအတွက် အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။အသက်ရှုကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် အမျိုးသား အလုပ်သမား အကာအကွယ်ပေးရေး ကိရိယာ စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု နှင့် အသက်ရှုကိရိယာ စစ်ဆေးခြင်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
ZR-1211 မျက်နှာဖုံးခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်ကိရိယာကို ထိန်းညှိစမ်းသပ်မှုအခြေအနေတွင် မျက်နှာဖုံးများ၏ ရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့် အသက်ရှူထုတ်ခြင်းခံနိုင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။များပြားလှသော စီးဆင်းမှုနှုန်းများနှင့် လိုက်ဖက်သော၊ ဆက်စပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မျက်နှာဖုံးများကို စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် သင့်လျော်သည်
ZR-1201 Mask ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်ကိရိယာ
ZR-1201 Mask resistance tester သည် YY 0469-2011 နှင့် ကိုက်ညီသည်.နှာခေါင်းစည်းများ၏ ကွဲပြားသောဖိအားကို စမ်းသပ်ရန် လေစီးဆင်းမှုနည်းလမ်းကို နှာခေါင်းစည်းတစ်ခု၏ အချို့သောဧရိယာကို ဖြတ်သွားသောအခါတွင် အသုံးပြုသည်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများစစ်ဆေးရေးအင်စတီကျုများ၊ မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဆက်စပ်သုတေသနဌာနများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ZR-1006 မျက်နှာဖုံးသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာစစ်ဆေးရေးဌာန၊ လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးစင်တာ၊ ဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးစင်တာ၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာများအတွက် နှာခေါင်းစည်းများနှင့် စစ်ထုတ်ပစ္စည်းများ၏ လေ၀င်လေထွက်ခုခံမှုကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်၊ အထည်အလိပ်စစ်ဆေးရေးဗဟို၊ ဆေးရုံများနှင့် R&D ထုတ်လုပ်သူမျက်နှာဖုံးများ။
ZR-1002 မျက်နှာဖုံးအမှုန်အမွှားကာကွယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်သူသည် 500L ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးစမ်းသပ်ကက်ဘိနက်အတွင်းမှအမျိုးသားစံနှုန်းခေါင်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်မျက်နှာဖုံးများ၏အမှုန်အမွှားကာကွယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည် ( 0.6 ± 0.050) μm၊ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် NaCl aerosol ၏ 20mg/m³ သို့မဟုတ် ဒြပ်ထုအလယ်အလတ်အချင်း (0.3 ± 0.050) μm၊ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် 20mg/m³ အဆီပြန်သောစမ်းသပ်ခန်းထဲသို့ အဆီပြန်သော aerosol ဖြစ်သည်၊ နှင့် ဦးခေါင်းသည် sinusoidal မျဉ်းကွေးတွင် အသက်ရှူခြင်းကို ပုံစံတူပြုလုပ်ထားသည်။ မျက်နှာဖုံး၏ အမှုန်အမွှားကာကွယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် မျက်နှာဖုံးရှေ့နှင့်နောက်တွင် ဆား aerosol နှင့် oil aerosol ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုသိရှိရန် ရေဆန်နှင့်အောက်ပိုင်း photometers ကိုအသုံးပြု၍
Mask Bacterial Filtration Efficiency (BFE) စမ်းသပ်ကိရိယာ
ZR-1000A မျက်နှာဖုံး ဗိုင်းရပ်စ် စစ်ထုတ်ခြင်း ထိရောက်မှု (VFE) စမ်းသပ်သူ ၏ အဓိက သတ်မှတ်ချက်များသည် YY/T1497-2016 < ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မျက်နှာဖုံး ပစ္စည်းများ ၏ ဗိုင်းရပ်စ် filtration efficiency (VFE) အတွက် အကဲဖြတ်သည့် နည်းလမ်း နှင့် ကိုက်ညီသည်—Phi-X174 bacteriophage ကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်နည်း >၊ တစ်ပြိုင်နက်တည်း နှိုင်းယှဥ်နမူနာယူခြင်းနည်းလမ်းသည် နမူနာကောက်ယူခြင်း၏ တိကျမှုကို တိုးတက်စေသည်။